Ixesha kunye nabahlobo 9
Umhlobo osuka kwiCentral States ubuze: Ngaba kuphosakeleyo ukusebenzisa ingqondo endaweni yezindlela zokwenyama ukuphilisa ukugula ngokomzimba?
Umbuzo ugubungela intsimi enkulu kakhulu ukuba ungaphendulwa ngokungaphendulwanga ngu "ewe" okanye "hayi." Kukho iimeko apho umntu enesizathu sokusebenzisa amandla okucinga ukoyisa ukugula emzimbeni, kwimeko apho singathi bekungalunganga. Kwiimeko ezininzi ezininzi kuthathwa isigqibo esingalunganga sokusebenzisa ingqondo endaweni yeendlela zomzimba zokunyanga izifo zomzimba. Singazenza njani ke ezi meko kwaye zichanekile? Oku kunokubonwa kuphela ngokomgaqo obandakanyekileyo. Ukuba siziva siqinisekile ngomgaqo iindlela ezisebenziweyo ziya kuvumelana nayo kwaye ke kufanelekile. Ukuze umbuzo uphendulwe ngendlela eqhelekileyo kwaye ungayi kwimeko ethile, ukuba umgaqo-siseko uqondwa uya kukwazi ukuwusebenzisa kulo naliphi na ityala elithile kwaye ugqibe ukuba ilungile okanye ayilunganga na ukunyanga izifo zomzimba iinkqubo zengqondo. Masifumane lo mgaqo: Ngaba izigulo zomzimba ziyinyani, okanye ngaba yinkohliso? Ukuba izigulo zomzimba ziyinyani kufuneka zibe sisiphumo sezizathu. Ukuba imeko ekuthiwa kukugula emzimbeni kukukhohlisa ayisiyongozi yomzimba konke konke, ziinkohliso. Ukuba ukukhohlisa kuthiwa sisifo sengqondo nokuba isigulo sikhona ngengqondo kwaye asikho emzimbeni wenyama ke loo nto yinkohliso ayisosigulo somzimba, bubudenge. Kodwa ngoku asinako ukujongana nobuhlanya; sinexhala lokugula komzimba. Sivumela ukuba ukugula emzimbeni kube yinyani, sitsho ukuba ezi nyaniso ziyimpembelelo. Inqanaba elilandelayo kukukhangela unobangela wale miphumela. Ukuba siyakwazi ukufumana unobangela wokugula ngokwasemzimbeni siya kuba nako ukunyanga abagulayo ngokomzimba ngokususa unobangela wabo kunye nokunceda indalo ukulungisa lo monakalo. Isigulo somzimba sisenokuba sisiphumo sobangela okanye ukubangelwa yingqondo. Izigulo zomzimba ezibangelwa yindlela yokwenyama kufuneka ziphiliswe ngokwasemzimbeni. Ukugula okungokwasemzimbeni okunezizathu zengqondo, kufanele ukuba kunesizathu sokugula esisuswayo emva koko indalo kufuneka ivunyelwe ukuba iphinde iqalele kwakhona ukuvumelana ngokomzimba. Ukuba oku kuchazwe ngokuchanekileyo kuchanekile, ngoku singathi nakuphi na ukugula ngokwasemzimbeni okunesizathu esingokwasemzimbeni akufuneki kuphathwe engqondweni, kwaye nasiphi na isigulo somzimba esivela ngenxa yezizathu zengqondo kufuneka sibenezinto ezibangela ukuba zisuswe kwaye nemvelo iyakulungisa ukugula komzimba. Ubunzima obulandelayo ukuze bususwe ukuze kufunyanwe indlela yethu kukuthatha isigqibo sokuba zeziphi izifo zomzimba ezinesizathu somzimba, kwaye zeziphi izifo zomzimba ezinesizathu sengqondo. Ukucutha, amanxeba, amathambo ophukileyo, iipreyini kunye nokunye okunjalo, zibangelwa kukudibana ngqo nezinto zomzimba kwaye kufuneka ufumane unyango lomzimba. Izifo ezinjengokusela, isifo seswekile, isifo seengcongconi, i-locomotor ataxia, inyumoniya, idyspepsia kunye nesifo se-Brights, zibangelwa kukutya okungafanelekanga kunye nokungakhathalelwa komzimba. Ezi kufuneka ziphiliswe kukhathalelo olufanelekileyo lomzimba nangokuzondla ngokutya okunempilo, okuya kususa unobangela wokugula ngokomzimba kunike indalo ithuba lokubuyisela umzimba kwimeko yayo esempilweni. Izigulo zomzimba eziziziphumo zengqondo, ezinje ngethamsanqa, kunye nezifo eziziswa kukusetyenziswa kweearcotic, iziyobisi notywala, kunye nezifo ezibangelwa ziingcinga zokuziphatha okubi kunye nezenzo, kufuneka ziphiliswe ngokususa unobangela wesi sifo. kunye nokuncedisa indalo ukubuyisela ukulingana komzimba ngokutya okunempilo, amanzi amsulwa, umoya omtsha kunye nelanga.
Ngaba kulungile ukuzama ukuphilisa ukugula ngokomzimba ngengonyango yengqondo?
Hayi! Ayilunganga ukuzama ukunyanga izifo zomzimba zomnye "unyango lwengqondo," kuba umntu uzokwenzakalisa kakhulu kunokulunga. Kodwa umntu unelungelo lokuzama ukunyanga nayiphi na ingxaki yakhe kwaye inzame inokuthi ihlangane nezibonelelo ezibonakalayo ngaphandle kokuba akazami ukuzenza ukuba akholelwe ukuba akaphilanga.
Ukuba kulungile ukuphilisa izifo eziphathekayo ngokweendlela zengqondo, ukubonelela izifo eziphathekayo zivela engqondweni, kutheni kulungile ukuba usosayensi okanye umKristu ukuba aphilise ezo zifo ngonyango lwengqondo?
Ayilunganga into yokuba izazinzulu zamaKristu nezengqondo azazi ngengqondo okanye ngemithetho elawula nokwenza izinto ngengqondo; kuba kwiimeko ezininzi isazinzulu ngengqondo, engazi oonobangela bokugula ngokwasemzimbeni, kwaye ehlala ebukhanyele ubukho bokugula, azame ukwenza unyango ngokunyanga ngengqondo isigulana sakhe okanye ngokucebisa ngengqondo umonde ukuba mkhulu kunesokugula okanye ogulayo sisikrelemnqa nje; ke ngoko, engazi oyena nobangela okanye impembelelo entle yengqondo yakhe kwisigulana ngokunxulumene nokugula, ngakumbi ukuba ogulayo akahoywa okanye athathelwe ingqalelo njengonkohliso, akaxhaswanga kunyango. Kwakhona, ukuba izizathu zakhe bezilungile kwilinge lokuzama ukunyanga isigulana kwaye iziphumo zabonakala ziluncedo, oko kunjalo unyango beluya kuba alungalunganga ukuba isazinzulu ngengqondo siyamkele okanye ichaze imali yonyango.
Kutheni kungalunganga ukuba izazinzulu zengqondo zifumane imali yokonyango lwezinto eziphathekayo okanye ezingqondweni xa ugqirha behlawula imali yabo rhoqo?
Kungangcono ukuba ibinguRhulumente ukuba ahlawule okanye abagcine abantu koogqirha, kodwa ngenxa yokuba oku kungenjalo ugqirha kufanelekile xa ecela imali; kuba, kwindawo yokuqala akenzi bhetyeko yamandla obugqi ngenkqubo yengqondo, lo gama evuma ukuba izifo zizinto eziyinyani, kwaye ubaphatha ngokwasemzimbeni, kwaye ubaphatha ngokwasemzimbeni unelungelo lokufumana umvuzo ngokoqobo Akunjalo kwimeko yezengqondo okanye enye inzululwazi, kuba ibanga ukuba iphilisa ngengqondo, kwaye imali ayifanele ukuba nexhala ngengqondo kunyango lwezifo, njengoko imali isetyenziselwa ukusetyenziswa komzimba. Ukuba, ke, ukugula okungokwasemzimbeni kwakubizwa ngokuba yinkohliso, ngebengenalo ilungelo lokuthatha imali yonyango kunyango lwento ebungekho; kodwa ukuba ubuvumile ubugwala kwaye ubuphilisa ngeenkqubo zengqondo ubengasayi kuba nelungelo lokufumana imali ngenxa yokuba isibonelelo esifumeneyo kufanele ukuba sibe sesohlobo njengoko isibonelelo esinikiweyo, kwaye isibonelelo ekubeni sisengqondweni umvuzo ohlawulwayo kuphela. ulwaneliseko lokwazi ukuba isibonelelo sasinikiwe. Inzuzo efunyenweyo ifanele ifunyanwe kwindiza enye enikezelwa kuyo kunye noko.
Kutheni akulungile ukuba usosayensi wengqondo afumane imali yokunyanga kwezifo xa echitha ixesha lakhe kulo msebenzi kwaye kufuneka abe nemali yokuphila?
Kuba umntu ofumana imali akanakubuyisela impilo egqibeleleyo kulowo ugula ngengqondo ngelixa ingqondo yomphilisi wengqondo ingcolile ngenxa yokucinga ngemali. Umntu ebengenakuqasha umntu ochithekileyo, ongahlelelekanga, oziphethe kakubi ukufundisa nokuphucula isimilo sakhe okanye sabantwana bakhe. Kwaye akusekho mntu kufuneka aqeshe inzululwazi yengqondo okanye yobuKristu ukuba imphilise okanye izihlobo xa ingqondo “yenzululwazi” ifakwe kwaye igula yingxaki yemali. Kwanele ukutsho ukuba umphilisi wengqondo uphilisa uthando lokuphilisa kunye nokunceda abanye abantu. Ukuba kuyinyani oku, kwaye umbuzo wemali awungeni engqondweni yakhe uya kuvukela kwinqanaba lokwamkela imali; kuba ingcinga yemali kunye nothando lomntu akakho kwindiza enye kwaye azihambelani kwaphela kwiimpawu zabo. Ke ngoko, xa imali icetyisiwe ukuhlawula izibonelelo ezifunyenweyo, umphilisi uya kuyala ukuba uphilisa kuphela ngenxa yokuthanda umntu wakhe. Olu luvavanyo lokwenyani. Kodwa kuyabuzwa ukuba angalinikela njani lonke ixesha lakhe emsebenzini wakhe kwaye aphile ngaphandle kokufumana imali? Impendulo ilula kakhulu: Indalo iya kubonelela bonke abo bamthanda ngokwenyani kwaye abazinikeleyo ebomini babo ukumncedisa emsebenzini wakhe, kodwa bazanywa ngovavanyo oluninzi ngaphambi kokuba bamkelwe kwaye balungiselelwe. Enye yeemfuno ezifunwa yindalo kumphathiswa wakhe kunye nogqirha kukuba uya kuba nengqondo emsulwa, okanye ukuba ingqondo yakhe iya kukhululeka kuthando lokuzenzela inzuzo. Ngokucinga ukuba umntu oza kuba ngumphilisi unentando yendalo yakhe eluntwini kunye neminqweno yokunceda ngokunyanga kwengqondo. Ukuba unobuchule bendalo kwaye uhlangabezana nayo nayiphi na impumelelo, abaguli bakhe ngokwemvelo banqwenela ukubonisa umbulelo, kwaye bamnike imali, nangona engakhange ayifune. Ukuba uyayifuna okanye uyayamkela le nto kwangoko ingqina ukuba asinguye lowo unyulelwa yindalo; ukuba ekuqaleni uyala indalo uyamzama kwakhona, kwaye ufumanise ukuba ufuna imali, kwaye xa ekhuthazekile ukuyithatha imfuneko uhlala ebonakala emnyanzela ukuba enze njalo; kunye nokwamkelwa kwemali nokuba yeyiphi na injongo yakhe, kungenza indlela yokuqala yokusebenzisa ingqondo yakhe ngengxaki yemali-njengoko kungqineke kunjalo nakwabaphilisi abaphumeleleyo. I-microbe yemali isulela ingqondo yakhe, kwaye isifo semali sikhula ngempumelelo yakhe, kwaye nangona esenokubonakala ngathi uza kuxhamla abaguli bakhe kwinxalenye enye yemvelo yabo uya kubenzakalisa kwelinye icandelo ngoba, nangona engazi, uye waziphatha kakubi kwaye ogulayo ngengqondo kwaye akanakusilela ekunyangeni abaguli bakhe ngezifo zakhe. Kungathatha ixesha elide, kodwa iintsholongwane zesifo sakhe ziya kumila ezingqondweni zezigulana zakhe, kwaye eso sifo sinokuqubeka emacaleni obuthathaka bazo. Ukuze kungalunganga kulowo oza kwenza unyango olusisigxina ukuba afumane imali, kuba akanakuphila ngokusisigxina ukuba ufumana imali, nangona kunjalo iziphumo zibonakala kumphezulu wezinto. Kwelinye icala, ukuba umnqweno wakhe kuphela wokunceda abanye endaweni yokwenza imali ngokunyanga, indalo iya kumbonelela.
Uluntu lungabonelela njani umntu onqwenela ukunceda abanye, kodwa ngubani ongenakho ukuzixhasa?
Xa esithi indalo iya kubonelela oko akuthethi ukuba uya kuhlamba imali ezingubeni zakhe okanye amandla angabonakaliyo aya kumondla okanye amtyise iintaka. Kukho icala elingabonakaliyo lendalo, kwaye kukho icala elibonakalayo. Imvelo iyawenza umsebenzi wayo wokwenyani kwicala elingabonakaliyo lesizinda sayo, kodwa iziphumo zomsebenzi wakhe zibonakala kumhlaba obonakalayo. Akunakwenzeka ukuba wonke umntu abe ngumphilisi, kodwa ukuba omnye phakathi kwabaninzi unokuziva ukuba unobuhlakani bendalo kwaye uthathe isigqibo sokuba angathanda ukwenza umsebenzi wobomi bakhe, ke loo ndoda iya kwenza umsebenzi wayo ngochuku. Phantse kuzo zonke iimeko ezinjalo uya kufumanisa ukuba imali yakhe ayinakumvumela ukuba achithe lonke ixesha lakhe ekuphiliseni ngaphandle kokuba efumene imali. Ukuba yamkele indalo yemali ngekhe imamkele. Uya kusilela kuvavanyo lokuqala. Ukuba uyala imali kwaye uchithe ixesha elinjalo lokunyanga njengoko iimeko zakhe ziya kuvuma, ke ukuba wayenakho amandla endalo kunye nemisebenzi yakhe kwihlabathi kunye nakwintsapho yakhe engazange ayithintele, uyakufumana isikhundla sakhe ebomini ukuba sitshintshe ngokuthe ngcembe. Ngomnqweno oqhubekayo wokusebenzisa ixesha lakhe ngokuncomekayo ukuba asebenzele uluntu, iimeko zakhe kunye nobudlelwane bakhe nobuntu ziya kuqhubeka zitshintsha ade azifumana ekweso sikhundla, ngokwemali nangolunye uhlobo, njengokuvumela anikele ngexesha lakhe lonke emsebenzini wakhe. Kodwa, kunjalo, ukuba wayenengcinga engqondweni yakhe ukuba indalo yayilungiselela ukumbonelela, loo ngcinga yayiya kumenza angafaneleki ngomsebenzi wakhe. ulwazi kufuneka lukhule ngokuthe chu kunye nokukhula kwakhe. Ezi ziinyaniso, ezinokubonwa kubomi babaphathiswa bendalo abaninzi. Kodwa ukubona ukuqhubeka kwendalo kuphuhlisa iinyani, umntu kufuneka akwazi ukusebenza nendalo kwaye aqaphele ukusebenza kwakhe ngaphantsi komphandle wezinto.
Ngaba ingcali yobuKristu kunye nengqondo engenzi kakuhle xa ziphumelela unyango apho ogqirha bahluleka khona?
Lowo ujonga iziphumo kwangoko ngaphandle kokwazi umgaqo obandakanyekileyo uya kuthi, ewe. Kodwa sithi, hayi! Kuba akukho mntu unokwenza into elungileyo ngokusisigxina ngaphandle kwemiphumo emibi ukuba indawo yakhe iphosakele kwaye ukuba awazi umgaqo obandakanyekayo. Ngaphandle kombuzo wemali, ugqirha wengqondo okanye elinye igqirha eliphantse ukuba lihlaselwe liqala ukusebenza ngakwindawo engeyiyo, nangaphandle komgaqo obandakanyekayo ekusebenzeni ngengqondo. Into yokuba banyanga izifo ezithile ingqina ukuba abazi nto ngokusebenza kwengqondo, kwaye bangqina ukuba abafuneki basebenzise igama elithi "inzululwazi" abathi ibango. Ukuba banokubonakalisa ukuba bayayazi indlela esebenza ngayo ingqondo ngokunxulumene nezifo ezithile, baya kuba befanele ngokwengqondo ukubaphatha abanye, nangona benokuba bengakulungelanga ukuba nesimilo.
Yiyiphi imilinganiselo esinayo malunga neemfuno zengqondo isazi senzululwazi kufuneka sibe nayo?
Ukuze ube nokusebenza ngokwengqondo ukunyanga enye ngokwengqondo kufanele ukuba ibe nakho ukuzibeka ingxaki okanye ibe nengxaki enikwe yona eza kuye isombulule. Kuya kufuneka ke abukele ukusebenza kwakhe kwengqondo kwiinkqubo zokucinga ngexesha lokucombulula ingxaki kwaye angaboni kuphela ezi nkqubo zengqondo ngokucacileyo njengoko intshukumo yentaka ibaleka ngokupheleleyo, okanye ukupeyinta kwevoli ngumculi. , okanye uyilo lwesicwangciso ngumyili wezinto zokwakha, kodwa kuya kufuneka aqonde iinkqubo zengqondo yakhe njengoko eya kuziva kwaye azi iimvakalelo zentaka kunye nesizathu sokubhabha kwayo, kwaye azive iimvakalelo zomculi kwaye azi ubume be umfanekiso wakhe, kwaye ulandele ingcinga yomyili kwaye azi iinjongo zoyilo. Ukuba uyakwazi ukuyenza le nto, ingqondo yakhe iyakwazi ukuzilungiselela ngengqondo yomnye. Kodwa kukho le nyaniso: Ukuba angayenza into enjalo ngekhe azame ukunyanga ngokusebenza kwengqondo kwizigulo zomzimba ezinesizathu somzimba, angasoze azame ukunyanga izifo zomzimba "ngokuphatha ingqondo yomnye," ngesizathu sokuba umntu unokuphilisa iingqondo zomnye. Ingqondo nganye mayibe ngugqirha wayo ukuba uza kwenza unyango. Yonke into anokuyenza yayikukucacisa ubunyani bendalo yokugula ukuya kwingqondo yomnye, abonise imvelaphi yokugula nendlela apho unyango olunokuthi lwenziwe ngayo. Oku kunokwenziwa ngelizwi lomlomo kwaye akufuneki kunyangwe ngengqondo okanye ukwenza into engaqondakaliyo. Kodwa ukuba le nyaniso ibonwa ihlasela ezingcanjini zombini zeSayensi yeNgqondo kunye neyobuKhristu iyaphikisana neenkolelo zombini.
Ngendlela ephi ukukwazi ukulandela imisebenzi yomntu okanye yengqondo yakhe, nokubona ngokwenene imbangela, ukuchasisa amabango eengqondo kunye namaKristu?
Ibango lezi ntlobo zombini "zesayensi" zikwisimo sokukhanyela kunye nokuvuma. Ukuthatha isikhundla sabafundisi kunye nabaphilisi baqinisekisa ubuchule babo bokufundisa iimfihlakalo zehlabathi elicinga njengenzululwazi. Baqinisekisa ukungabikho komcimbi kunye nokugqwesa kwengqondo, okanye bayabukhanyela ubukho bobubi, izifo nokufa. Ukanti bazimise njengeenkokeli kwilizwe le-fizikisiki ukungqina ukuba akukho nto ikhoyo, ukuba akukho bubi, kwaye akukho sifo, akukho kufa, eso sifo siyimpazamo, kukufa bubuxoki. Kodwa ngaphandle kobukho bento, isifo kunye nempazamo, ngekhe baphile njengoko besenza ngokufumana iifizi kunyango lwesifo esikhoyo, bangenakho nokuseka iicawa nezikolo ezibizayo ukuba zifundise ubukho besifo, umba kunye ububi. Igama lesayensi, elifunyenwe zizazinzulu kwaye zasebenza kwimithetho eqinisekisiweyo phantsi kweemeko ezimiselwe kwangaphambili, bayalithatha, emva koko bayayikhaba le mithetho. Ukuzikhohlisa, bakhohlisa abanye, kwaye ke bahlala kwihlabathi lokukhohlisa, elenzelwe bona. Amandla okubona ukusebenza kwengqondo, ahluze ingqondo ekubeni ayeke kuba ibonakalisa ukukhutshwa kwefuthe lomzimba kwizizathu zengqondo, njengesenzo sentiyo, uloyiko, umsindo okanye inkanuko. Ukwazi ukubona ukusebenza kwengqondo yomntu nakho kuzisa kunye necandelo lokuvavanya umzimba wenyama njengento eyahlukileyo kwengqondo, kwaye konke oku kungqina ubunyani kwiplanethi nganye yokusebenza kunye nentshukumo yengqondo kuyo nayiphi na inqwelomoya. Ingqondo ephuhlisiweyo ayinakuze ivume ibango lezenzululwazi ngengqondo okanye kobuKristu kuba loo mabango aya kwaziwa ukuba ayichanekanga, kwaye ukuba omnye woososayensi banokwazi ukubona izibakala kwindiza nganye ngekhe aqhubeke inzululwazi ”kwaye kwangaxeshanye zibone izibakala.
Ziziphi iziphumo zokwamkelwa nokusebenza kweemfundiso zamaKristu okanye izazi zesayensi?
Iziphumo, okwethutyana, zibonakalisa ukuba ziyingenelo kuninzi lweemeko kuba ukuqunjelwa kutsha nje kwaye impilo yokukhohlisa inokuhlala ixesha kunye nexesha kuphela. Kodwa kuya kufuneka kufike impendulo kulo lonke unkohliso, oluya kuzisa iziphumo ezibi. Ukufundiswa kunye nokuqhelaniswa neemfundiso zabo kuphakathi kolwaphulo-mthetho olubi kakhulu nolude oluchasene noluntu njengoko lunyanzela ingqondo ukuba iphike izibakala njengoko zikho nakweyiphi na inqwelomoya. Ingqondo ephathisiweyo yenziwa ukuba ingakwazi ukwahlula phakathi kwinyani, kwaye ke oko kungenako ukuqonda inyani kuyo nayiphi na inqwelomoya. Ingqondo iba yinto engathandekiyo, engaqinisekanga, kwaye iyakwala okanye iqinisekise nantoni na ebizelweyo kunye nokuvela kwayo ukuba ibanjiwe, inokuba ngummangaliso.
Kutheni le nto uninzi lwabanyangi ngengqondo bephumelela ukuba ngaba abalwenzi unyango, kwaye ukuba ayisiyiyo le nto bazimeleyo ngayo, ngaba abaguli babo abayi kuyifumana inyani?
Bonke abanyangi abazizo ngobuqhetseba ngabom. Abanye babo bakholelwa ukuba benza into elungileyo, nangona benokuthi bangavavanyi ngokusondela kakhulu kwiinjongo zabo. Umphilisi ophumelelayo ngengqondo uyaphumelela kuba eye wazibophelela kuye kwaye waba ngumkhonzi woMoya omkhulu woMhlaba, kwaye noMoya woMhlaba wamvuza. Ukuba basebenza inyange akukho namnye umntu owaziyo ngabo okanye umsebenzi wabo oya kukhanyeka. Kodwa indlela kunye neenkqubo ezenziwa ngayo unyango, abanyangi ngokwabo abazi. Ngokwemvelo igqirha belingayi kulindeleka ukuba lizibonakalise kukukhanya okungathandekiyo kwizigulana, kodwa zonke izigulana azimboni lowo uphilisayo ekukhanyiseni kwakhe. Ukuba sikholelwe kwezinye zezigulana eziye zanyangwa ngabaphilisi, ezi zinokubonakala kukukhanya okungathandekiyo. Omnye wemibuzo ophakamayo kunyango lwezigulana, ngulowo unokuphakamisa ukunyanga anganyangeki kwisigulana xa isigulana siphantsi kolawulo lwengqondo okanye ubuncinci besenza udlwengulo ukufumana iingcebiso zakhe. Ayizothusa into yokwazi ukuba kukho abanyangi abanganyanisekanga kwingcali yengqondo, njengoko kukho lonke urhwebo okanye umsebenzi. Ithuba kunye nesilingo esinikezelwa kwindoda engazithembisiyo sikhulu, kuba ngokucebisa ngengqondo okanye ngokulawula yinto elula yokuchaphazela ingqondo yesigulana esinoxabiso nesombulelo sokunyanzelisa ukwamkelwa kwegqirha ukuba lihlawulwe imali eninzi okanye isipho, ngakumbi xa pa-tient ukholelwa ukuba uzuze.
Ngaba uYesu kunye nabaninzi abangcwele abaphilisa ukugula okungokwenyama ngeendlela zengqondo kwaye ukuba kunjalo kwakungalunganga?
Kuyabangwa, kwaye siyakholelwa ukuba kunokwenzeka kwaye kuyinyani, ukuba uYesu kunye neengcwele ezininzi zanyanga izifo zomzimba ngeendlela zengqondo kwaye asinantandabuzo ekuthini zazingachanekanga, ukuba bayayazi into abayenzayo. Ukuba uYesu wayeyazi into awayeyenza ekuphiliseni asithandabuzi, kwaye uninzi lwabangcwele nabo babenolwazi oluninzi kunye nentando enkulu eluntwini, kodwa ke yena uYesu kunye nabangcwele zange bafumane mali yonyango. Xa lo mbuzo uziswa ngabantu abathanda umsebenzi wabaphilisi abahlali bema ukuze bacinge ngale nyaniso. Hayi indlela ebekungafani ngayo noYesu kwaye ngokungathandabuzekiyo kunokubonakala ngathi ku-Yesu okanye kubafundi bakhe okanye nakwabanye abangcwele bangabiza kakhulu ngokutyelelwa sisonke isigulana, unyango okanye unyango, okanye ukubiza ukusuka ezintlanu ukuya kutsho kwi-100 leedola isifundo, kwizifundo , ukufundisa abafundi indlela yokuphilisa. Ngenxa yokuba uYesu waphilisa izifo ezininzi ayisiyo imvume yokuba umntu azenzele ishishini lokuphiliswa kwengqondo. Nabani na ozimiseleyo ukuphila ubomi obuphantse bufane nobukaYesu ngokusemandleni akhe, uya kuba nelungelo lokuphilisa, kodwa uya kuphiliswa luthando ngomnye umntu, kwaye angaze ayamkele intlawulo. UYesu waphilisa ngolwazi. Xa wathi "Uxolelwe izono zakho," kwakuthetha ukuba umntu ohlawulelwe isohlwayo setyala lakhe. Ukwazi oku uYesu wasebenzisa ulwazi kunye namandla akhe okumsindisa ekubandezelekeni okungakumbi, ngaloo ndlela esebenza ngokuvumelanayo kunokuchasana nomthetho. UYesu, naye nawuphi na umntu onolwazi, ebengekhe aphathe kakubi wonke umntu oza kuye, kodwa kuphela abo wayenokubaphilisa ngaphakathi komthetho. Yena, ngokwakhe, akazange eze phantsi komthetho. Wayengaphezulu komthetho; kwaye ngaphezulu kwayo wayenokubabona bonke abo babephantsi komthetho kwaye bebandezeleka yiyo. Unokukhulula emzimbeni, ekuziphatheni, okanye engqondweni. Izenzo ezigwenxa zokuziphatha zaziphiliswa nguye xa babeyinyamezele imbandezelo eyimfuneko yokubenza babone ukungalunganga kwabo, kwaye xa benqwenela ngokwenene ukwenza ngcono. Abo ukugula okuvela kwisizathu sengqondo kunokunyangeka kuphela xa iimfuno zomzimba sele zithotyelwe, xa iindlela zabo zokuziphatha zitshintshiwe, kwaye xa bevuma ukuthatha uxanduva lwabo kunye nokwenza imisebenzi yabo. Xa ezo zinto zaziza kuYesu wasebenzisa ulwazi kunye namandla akhe okubasindisa ekubandezelekeni okungakumbi kuba babehlawule ityala ityala kwindalo, baguquka kwizenzo zabo eziphosakeleyo, kwaye kwindawo yabo yangaphakathi babezimisele ukuthatha kunye nokwenza uxanduva lwabo. Emva kokubaphilisa wayedla ngokuthi: “Hambani, nize ningoni kwakhona.”
Ukuba kuphosakele ukufumana imali yokunyanga izifo zomzimba ngenkqubo yengqondo, okanye ukunika 'ukufundiswa kwesayensi,' ayilungile na into yokuba utitshala wesikolo afumane imali yokuyalela abafundi kuwo nawaphi na amasebe emfundo?
Akukho nto ithelekiswayo encinci ekufuneka yenziwe phakathi kukatitshala okanye umphilisi wesayensi yengqondo okanye yobuKristu kunye notitshala kwizikolo zokufunda. Inqaku kuphela apho bafana khona kukuba imfundiso yabo bobabini inento yokwenza neengqondo zabaguli babo okanye abafundi. Ngaphandle koko bahluke kumabango abo, injongo, iinkqubo, kunye kwiziphumo. Umfundi wezikolo ufunda ukuba amanani aneenqobo ezithile; Ukuphinda-phinda kwamanani athile kuhlala kusisiphumo esinye, kwaye akaze, naphantsi kwazo naziphi na iimeko utitshala axelele umfundi ukuba amatyeli amathathu uphinda-phindwe kabini ngababini, okanye okuphindwe kabini ukwenza u-12. Nje ukuba umfundi afunde ukwanda unokuhlala engqina inyani okanye intsomi yengxelo yomnye ekuphindaphindweni kwamanani. Akungabikho kwimeko apho umphilisi akwazi ukufundisa umntwana wakhe isigulana ngayo nayiphi na into echanekileyo. Isifundi sifunda igrama kunye nemathematics ngenjongo kunye nokulula kokucwangciswa ngokuchanekileyo kunye nokubonisa okulula kweengcinga zakhe kwabanye abanengqiqo. Ugqirha wengqondo okanye uChristian Scientist akafundisi umfundi wakhe ngemithetho okanye umzekelo ukungqina okanye ukungavisisani neenkcazo zabanye, okanye acwangcise ezakhe iingcinga kwaye azichaze ngendlela engenakuze ibekho nakwabanye abantu abangakholelwa kuye, okanye avume iinkolelo zakhe kunye nengqiniseko yakhe yokuma kwiimfaneleko yoko bakulungeleyo. Izikolo zokufunda zikhona ngenjongo yokwenza ukuba umfundi aqonde iinyani zeplanethi ahlala kuyo, abe luncedo kwaye abe lilungu eluntwini. “Isazinzulu” umphilisi akangqina okanye abonise amabango omnye “unososayensi” ngeenkqubo zakhe, okanye umfundi ongaphilanga angqine ubunyani bezityholo zakhe okanye zomnye utitshala onobunyani bokunyaniseka; kodwa umfundi wezikolo unako kwaye angqina ukuba oko akufundayo kuyinyaniso okanye bubuxoki. Utitshala wezikolo akazenzi ngathi ufundisa ukunyanga izifo ngokwasemzimbeni, kodwa "inzululwazi" uyayenza loo nto, ngoko ke akukho klasi linye notitshala ezikolweni. Utitshala ezikolweni uqeqesha ingqondo yomfundi wakhe ukuba aqonde izinto ezibonakalayo kwiimvakalelo, kwaye ufumana umvuzo wakhe kwimali ebubungqina boluvo; kodwa inzululwazi yengqondo okanye yobuKristu iqeqesha ingqondo yomntu onyamezelayo ukuba aphikise, ayikhanyele, kwaye angakholelwa iinyani ezibonakalayo kwizimvo, kwaye kwangaxeshanye akhuphe umvuzo wakhe ngemali, kwaye ngokobungqina bengqondo. Ke ukuba kubonakala ngathi akukho nto imbi kumfundisi-ntsapho ekufumaneni imali njengentlawulo yeenkonzo zakhe ngokwendlela yenqwelomoya ahlala kuyo kwaye efundisa; kanti akulunganga ukuba isazinzulu ngengqondo okanye isazinzulu sobuKhrestu sibanga ukuba siphilise okanye sifundise ngokuchasene nobungqina beemvakalelo, kwaye kwangaxeshanye sithathe okanye sihlawule ngokuthe ngqo kwiimvakalelo aziphikayo, kodwa abe eyonwabela. Kodwa masithi kuphosakele ukuba utitshala wezikolo afumane imali yeenkonzo zakhe.